Sidee ayay ciidamada Hindiya ugu diyaarsan yihiin hanjabaadaha uga imaanaya Shiinaha? | Dayniile.com
Home Warkii Sidee ayay ciidamada Hindiya ugu diyaarsan yihiin hanjabaadaha uga imaanaya Shiinaha?
Shaki kuma jiro in madaxa ciidamad
a uu xilkan qabtay xilli muhiim ah. Xiisadda muddada dheer socotay ee Hindiya kala dhaxeysa Shiinaha ma aysan qaboobin, isaga qudhiisa ayaana sheegay in Shiinuhu uu weli wado inuu ciidamo ku soo daabulo garoomo ku yaalla gobolka Tibet.
Previous articleKhilaaf ka dhex-taagan xubnaha dowladda rayidka ah iyo saraakiisha militariga Sudan
Next articleMareykanka oo taageero Dhinaca Amniga u ballan qaaday Dowladda Soomaaliya
Dadka wadanka Jarmalka ayaa maanta safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta si ay usoo doortaan hogaamiye uu wadankaasi yeesho. Dadka codaynaya oo tobanaan kun lagu...